Dib-u-eegista qasabadaha Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 Iibsashada Dheryaha Weelasha-Jikada, Qasabadaha Buuxi Dheriga, Qolka Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Dib-u-eegista Faucets Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee Buuxiyeyaasha Dheriga
Dib-u-eegista Faucets Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee Buuxiyeyaasha Dheriga
2020 / 10 / 25 QoondayntaTilmaamaha qasabada 11857 0
Waxay u egtahay wax ka yimid cillad-xumo, laakiin dhammaanteen isku walwal ayaa na soo maray. Waad buuxinaysaa dheri weyn, dabcan intaad diyaarinayso iid muhiim ah sida cashada Thanksgiving, iyo halganka aad uga qaadaysid saxanka ilaa shooladda, waad daadineysaa oo aad dhulka dhigaysaa.
Tuubada buuxisa dheriga ayaa ah mid aad uga fudud. Si aad u dhammaystirto jikadaada runta ah, iskuday qasabadaha buuxi Delta Delta.
1. Casriga Feejiyaha Feejiyaha Feejignaanta Casriga ah
Delta's Feejiyaha Casriga ee Feejignaanshaha-casriga ah1165LF-AR waa wax weyn kudarsaday jikada kasta oo casri ah. Qaabka qafiifka ah macnaheedu waa qasabadaadu waxay noqoneysaa qayb quruxsan oo ka mid ah dhabarka jikadaada.
Falka lagu xiro laba-labo
24-inji kala-goysyada lulid
Minimalism waa magaca ciyaarta leh qasabadaha buuxiye Delta, gaar ahaan Casriga. Waa qasab fudud oo wali waxtar leh oo leh xawaare dhan 4-gallon-daqiiqadii. Taasi waa qiyaastii laba jeer heerka socodka ee qasabad dhaqida jikada.
Maskaxda ku hay in qasabadani, sida inta badan qasabadaha wax lagu buuxiyo, ay isticmaasho oo keliya biyo qabow. Taasi waxay ka dhigeysaa rakibid deg deg ah oo fudud.
2. Feejiyaha Feejiyaha-Dhaqan-Dhaqameedka Dhaqameed
Astaamaha casriga waa weyn yihiin, laakiin daraftiisa casriga ahi kuma haboona qaabka gurigaaga. Haddii aad doorbideyso muuqaal dhaqameed, waxaad ku habboon tahay Dhaqanka-Buuraha Dheriga Fiilaha Feejignaanta 1177LF-AR .
Lix xulasho dhammayn
Muuqaal-caqli-gal ah, Casriga iyo Dhaqankuba waa ku dhowaad isku mid. Labadooduba waxay leeyihiin xawaare afar-galaan ah daqiiqadii-socodka waxayna isticmaalaan biyo qabow oo keliya iyadoo lagu rakibo hal dalool oo keliya. Waxay sidoo kale leeyihiin dherer isku mid ah oo ah 24-inji gacan laba-laab ah oo isku-laaban oo leh walxaha kala-xidha.
Naqshadeynta iyo sicirka ayaa ah farqiga koowaad ee udhaxeeya labadan qasabadood ee dheriga buuxiya, iyadoo Dhaqanku leeyahay qiime aad uyar. Dhaqanku wuxuu kaloo la yimaadaa xulashooyin dhammaystiran oo ka badan kan casriga ah.
Xulashada Delta Delta Fel Fiikahaaga
Cunto kariye kasta oo guri wuxuu ubaahan yahay qasabad wax lagu buuxiyo si ay uga dhigto karinta mid sahlan oo wax ku ool ah. Iyada oo leh astaamo isku mid ah labada doorasho ee ugu sarreeya Delta, waxay u soo degaysaa muuqaalka aad ka rabto jikadaada iyo nooca tuubada ee sida ugu fiican ugu habboon.
Faallooyinka qasabadda Delta waxaad ugu baahan tahay gurigaaga
Tuunbada waxay umuuqataa mid yar oo faahfaahsan marka loo eego qalabka jikadaada ama naqshadaada qubeyska. Hase yeeshe, waxay saameyn ku yeelaneysaa muuqaalka iyo shaqeynta jikadaada ama musqushaada, sidaas darteed maahan xulasho aad si fudud u qaadan karto.
Waa kuwee dadka ugu wanaagsan ee kuu sheegaya qasabadaha Delta ugu sarreeya ee aag kasta oo gurigaaga ka mid ah? Dadka isticmaalay oo sahamiyay qasabadahaas adiga kahor. Iyadoo dib u eegis lagu sameynayo tuubada Delta ee kor ku xusan, waxaad ka heli kartaa taam ku habboon qol kasta oo gurigaaga ka mid ah.
Hore:: Waa maxay astaanta qalabka musqusha ee wanaagsan? Next: Nooca qasabada musqusha iyo dayactirka qasabada musqusha
2021 / 02 / 03 11744
2021 / 01 / 28 9481